China Laptop ubhaka for Business Travel ukwenziwa kunye nefektri | UKumkani
Ubhaka weLaptop, iBusiness Travel Anti Theft Slim Laptops Backpack ene-USB yokutshaja iZibuko, Isikhwama seKhompyuter seSikolo seKholeji yaManzi yaBasetyhini kunye naMadoda silingana ne-15.6 Inch Laptop kunye neNcwadi yamanqaku.
Iimpawu zobhaka oqhelekileyo
Indawo yokuGcina kunye neepokotho: Igumbi elinye leelaptop libambe i-15.6 Inch Laptop kunye ne-15 Inch, 14 Inch kunye ne-13 Inch Macbook / Laptop Enye indawo enkulu yokupakisha egumbini le-iPad, imouse, itshaja, izibophelelo, iincwadi, iimpahla, i-ect. ecaleni kwebhotile yamanzi kunye neambrela yokwenza izinto zakho zilungelelaniswe kwaye kube lula ukuzifumana.
UKUQHUBEKA NOKUQINISEKA: Ukuhamba komoya okutofotofo uyilo kunye neplanga yomoya eshinyeneyo kodwa ethambileyo, ikunika inkxaso ephezulu. Ukuphefumla kunye nokuhlengahlengisa imitya yegxalaba kunciphisa uxinzelelo egxalabeni. Isiphatho esinezixhobo eziphezulu zokuphatha ixesha elide
UKUSEBENZA & UKHUSELEKILE: Umtya wempahla uvumela ubhaka ukuba ulunge kwimithwalo / kwisutikheyisi, tyibilika ngaphaya kwempahla ethe nkqo ityhubhu yokubamba ukuze kube lula ukuyiphatha. Ngepokotho yobusela efihliweyo ngasemva khusela izinto zakho zexabiso kumasela. ukwenza uhambo lwakho kunye nokuhamba kube lula naphi na apho uya khona.
I-USB PORT DESIGN: Yakhelwe kwitshaja ye-USB ngaphandle kwaye yakhelwe ukutshaja intambo ngaphakathi, le ubhaka ubhaka ikunika indlela elula ngakumbi yokutshaja ifowuni yakho ngelixa uhamba. Intloko yeJack: unokumamela umculo owuthandayo xa usiya ngaphandle kwezandla.
IINKCUKACHA ZOKUQHUBA NOKUQINISEKISA: Yenziwe ngelaphu lePolyester eliManzi eliHlalayo kunye nelizinzileyo elinemicu yesinyithi Ukuqinisekisa ukusetyenziswa okukhuselekileyo nokuhlala ixesha elide yonke imihla nangeempelaveki.Ukugcina kakuhle njengebhegi yomsebenzi wobugcisa, i-USB encinci yokutshaja i-bagpack, ukugqibelela kohambo lweshishini, ukuhamba ngeempelaveki, ukuthenga kunye nemisebenzi yangaphandle kubomi bemihla ngemihla. Isipho esihle sekholeji kwisikolo samabanga aphakamileyo umfundi omkhulu wamakhwenkwe, amantombazana, ulutsha, abantu abadala
Black Unisex Cool Travel Laptop okungangenwa Scho ...
Ipakethe yobhaka eyomeleleyo
I-Fashion Clear Sling Bag ubhaka